Ebe E Si Nweta Casino Bulgarian - Codes Bonus Code
Online cha cha Daashi Codes > Ebe E Si Nweta Kaadị Bulgarian
(534 votes, nkezi: 4.00 si 5)
Ụlọ ahịa cha cha chara acha n'Ịntanet Bulgaria
Lelee ndepụta nke ebe ntanetị ịntanetị na-anabata ndị si Bulgaria ma nye ha egwuregwu dị elu ma dị mma n'ịntanetị. N'ebe a, ị ga-ahụ ọtụtụ ntụrụndụ dị iche iche site na mpempe akwụkwọ iji kpoo egwuregwu ịgba chaa chaa site na ndị na-ere ihe dị egwu dịka NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Egwuregwu Egwuregwu na ọtụtụ ndị ọzọ.
I nwekwara ike nyochaa ntanetịime ebe nrụọrụ weebụ anyị dị n'ịntanetị iji nọgide na-enwe ọganihu oge kachasị mma n'ọkwá online, bonuses na ụzọ nkwụnye ụgwọ dịnụ maka ndị si Bulgaria.
Ịgba chaa chaa na Bulgaria
Bulgaria na-adọta ndị njem nleta ọ bụghị naanị na ájá ájá, kamakwa ọtụtụ ụdị dịgasị iche iche. Iji ọṅụ dị ukwuu nke ndị njem nleta na ndị bi n'ógbè ahụ, ịgba chaa chaa na Bulgaria bụ iwu. Rịba ama maka ndị ọbịa na kọntaktị anyị n'ịntanetị nke ịgba chaa chaa na casinos kasị ukwuu nke obodo dị na isi obodo Sofia, tinyere ebe ndị mara mma. Onye ọrụ ịgba chaa chaa nyere ikike na mba ahụ bụ Commission Gambling Commission, nke Ụlọọrụ Na-ahụ Maka Ego nke Bulgaria guzobere. Ihe odide nke na-akwado ịgba chaa chaa na mba ahụ bụ iwu ọhụrụ gbasara ịgba chaa chaa na Bulgaria, nke malitere na January 1, 2017.
Ịgba chaa chaa n'Ịntanet na Bulgaria
Ịgba chaa chaa n'ịgba chaa chaa na Bulgaria bụ iwu. Ndị na-ahụ maka mba ga-enweta ikikere ịrụ ọrụ ịgba chaa chaa na mpaghara nke mba ahụ. Na January 2017, e nwere ọtụtụ ebe ịgba chaa chaa n'ịntanetị na Bulgaria - site na casinos online na ndị na-ede akwụkwọ n'Ịntanet. Ihe ndị a ma ama bụ Pokerstars, bet365, bwin na betfair.
Ndepụta nke Top 10 Bulgarian Online Casino Sites
Bulgaria bụ mba nke na-adọta ndị njem nleta na ezumike mara mma na Oké Osimiri Ojii, ebe ntụrụndụ ski na ikpo chaos. Nchikota nke ozi ndi magburu onwe ya na ndi ochichi nke ndi ochichi na eme ka obodo a buru ihe ndi nleta si n'uwa nile. Ọrụ nke CasinoToplists bụ ịchọpụta otú ihe si agba chaa chaa na online casinos na Bulgaria n'oge ahụ.
Casino na Bulgaria:
Ịgba chaa chaa na iwu site na 1979 ka 2017;
Ndị na-arụ ọrụ n'Ịntanet ga-enwe ikikere nke Bulgaria. A na-egbochi ndị ọzọ;
Ọ bụrụ na anaghị egbochi onye ọrụ mba ụwa, ị nwere ike igwu egwu. Ma na nke onwe gị (nwere ike igbochi);
Casino teliti dị ka iwu na hotels 4-5 kpakpando, site na paspọtụ 18 afọ;
Ị chọrọ igwu egwu sinima n'Ịntanet? Anyị ga-agwa gị otu esi eme nke a - ntụziaka site na nkwụsị ụkwụ;
Bulgaria: ọdịdị ala na akụkọ ntolite, ebe ndị mara mma na Sofia, ihe ndị na-adọrọ mmasị banyere mba ahụ na ndị bi na ya.
Iwu nke Bulgaria na ịgba chaa chaa - amaokwu ihe mere eme
1979 Ịmepe nke mbụ cha cha na Sofia hotel "Vitosha"
1999 "Iwu nke Khazart" bụ iwu na-achịkwa ịgba chaa chaa na mba ahụ. Ịnye ndị ikikere site n'aka Ụlọ Ọrụ Obodo maka Ịgba Chaa chaa. N'ụzọ bụ isi, ndị investors n'ógbè ahụ nwere ikike imeghe cha cha. Ị nweta ikike maka ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-achọ ịzụta ụlọ nkwari akụ ọbụlagodi na 4 *.
2000 Ndị na-arụ ọrụ n'ịgba chaa chaa na-enwerịrị ga-enweta ikikere site n'aka State Commission for Gamingling (SCG).
N'ikpeazụ, ọ bụ naanị casinos ndị a ikikere na Bulgaria ka a na-ahapụ.
A na-egbochi casinos ndị mba ọzọ site na adreesị IP na ọbụna ndị nwere ikike na European Union (nke, n'eziokwu, megidere iwu nke European Union na ahia efu).
Dịka iwu nke steeti, onye ọrụ ahụ ga-anọrịrị "n'anụ ahụ" n'ókèala nke mba ahụ, nwere ngalaba dị iche na ịkwụ ụtụ isi maka mba ahụ.
Ọ bụrụ na saịtị ahụ n'ókèala Bulgaria adịghị egbochi - mgbe ahụ, ọ dị maka egwuregwu ahụ.
Ala "offline" casinos na Bulgaria
A na-enwekarị casinos ụwa na hotels na 4-5 kpakpando na ebe ndị ọzọ pụrụ iche
A chọrọ Casino iji nweta ikikere si Bulgaria
Ọnọdụ ikpebi maka ịnweta cha cha chaba na Bulgaria: afọ iri na afọ 18, inweta akwụkwọ edemede. Ị gaghị enwe ike igwu egwu ma ọ bụrụ na ị na-aṅụ mmanya na-egbu egbu ma ọ bụ na ịṅụ ọgwụ ọjọọ, na-abịa n'ákwà ma bụrụ onye ọrụ obodo ma ọ bụ na ị nwere njikọ na azụmahịa ịgba chaa chaa (ọbụna ndị ikwu nke ndị nwe ụlọ na ndị ọrụ agaghị ekwe ka egwu).
Ịgba chaa chaa n'Ịntanet na Bulgaria - Olee otú ị ga-esi amalite igwu egwu n'Ịntanet?
Anyị kpebiri ịmepụta ntụziaka nzọụkwụ site na ntinye iji malite igwu egwu na ntanetị n'ịntanetị. Dị ka a na-achị, ndị isi casinos nile si mba ọzọ na-eji asụsụ Bekee zuru ụwa ọnụ, yabụ ma ọ dịkarịa ala ihe ọmụma kachasị mkpa ị ga-achọ.
Lelee ma ụgbọala a bụ iwu na mpaghara Bulgaria. Ọ bụrụ na ekpochighị cha cha n'ókèala nke Bulgaria site na adreesị IP, mgbe ahụ ọ dị maka egwu. Mgbe ụfọdụ casinos anaghị anabata ndị si Bulgaria, ọ ka mma ịmụta banyere ya na otu cha cha na ọrụ nkwado. Ọrụ dị otú a dị n'ime ụlọ ntanetị ọ bụla dị mma.
Lelee cha cha nke a pụrụ ịdabere na ya. Maka nke a, ọ bara uru ijide n'aka:
Ọnụnọ nke ikikere mba ụwa maka cha cha chaa (ozi dị na ebe nrụọrụ weebụ cha cha na ngalaba ọha);
Ahụmahụ nke cha cha chaa ma ọ dịkarịa ala 3 afọ;
Ezigbo nzaghachi site na egwuregwu na netwọk;
A na-eji software nke cha cha na-anọchite anya mmepe mmepe nke egwuregwu kọmputa (NetEnt, Playtech, Microgaming, wdg).
Họrọ usoro ịkwụ ụgwọ - cha cha cha na-ahọrọ ọtụtụ nhọrọ ịkwụ ụgwọ (Visa, PAYPAL, WebMoney, Skrill, Yandex ma ọ bụ ndị ọzọ) na ị nwere ikike ịhọrọ ihe kwesịrị gị. Tụkwasị na nke a, dee iwu maka ịbanye ma wepụ ego (mgbe ụfọdụ, a na-akwụ ụgwọ nnukwu ụgwọ na akụkụ ụfọdụ na oge ụfọdụ). Echefula banyere mgbanwe nke ego na maka ọrụ nke ndị ọrụ iji wepụ ego.
Mụta banyere ọnọdụ ọrụ na cha cha:
Usoro nkwekọrịta (egwuregwu) na usoro ndị na-eguzosi ike n'ihe ahịa
Okwu nke oghere oghere (ụfọdụ casinos chọrọ ihe akaebe nke njirimara - nri.
Jiri nlezianya gụọ ọnọdụ nke cha cha:
usoro nke bonuses na ndi ahia,
ọnọdụ ndebanye aha (mgbe ụfọdụ a na-achọ nyochaa nke paspọtụ iji gosi akaụntụ ahụ);
ma ịkwesịrị ibudata ngwanro ma wụnye ya na kọmputa gị ma ọ bụ ị nwere ike igwu egwu na ihe nchọgharị ahụ
ihe achọrọ maka njirimara uzo (maka igwu egwu n'igwe na onye na-ere ndu)
Kedu ụdị nchedo nke cha cha cha na-enye? Data nchekwa data SSL, usoro egwuregwu egwuregwu, wdg.
Nhọrọ onwe na mmasị
Ngwurugwu a n'Ịntanet ọ na-enye egwuregwu ndị na-amasị gị?
Ọ nwere mmasị ịmepụta cha cha? Ọ bụ ihe omimi niile?
Mgbe ị marachara ihe niile dị n'elu, ị nwere ike ịga egwuregwu ahụ. CasinoTopLists na-adụ ọdụ gị ka ị gụọ ihe ọmụma banyere iwu nke egwuregwu, usoro na usoro. Ya mere ị nwere ike ịmụta ngwa ngwa na egwuregwu ahụ, ego gị ga-ejikwa mma.
Ọnọdụ nke Bulgaria na akụkọ nchịkọta akụkọ dị mkpirikpi
Obodo ahụ dị n'ụsọ osimiri Oké Osimiri Ojii na ókèala ya na mba ndị dị ka Gris, toro toro , Serbia, Romania na Macedonia. Maka oge mbụ gbasara Bulgarians, a kpọrọ ya na 354 afọ. Kemgbe ahụ, akụkọ ihe mere eme nke mba a emeela ọtụtụ ihe: ọ bụ mmeri Alaeze Ukwu Ottoman na njedebe nke 14th narị afọ, ikere òkè na agha na Serbia n'oge Agha Ụwa Mbụ, na ikere òkè na Agha Ụwa nke Abụọ n'akụkụ Germany . A malitere Bulgaria nke oge a na 1989 wee ghọọ mpaghara nke omeiwu. Ugbu a, a na-ekewa mba ahụ na mpaghara 28 na isi obodo na obodo Sofia.
Bulgaria na map nke Europe
Anya nke Sofia
Alexander Nevsky Katidral . Adreesị: Aleksandar Nevski 1 1000. A wuru ya na 1912 ma guzo n'èzí na ụka ndị ọzọ na ebe obibi ndị mọnk na ịdị ukwuu ya. Ike - 5,000 mmadụ.
National History Museum . Adreesị: Vitoshko Lale Street 16, 1618. N'ebe a, a na-anakọta ihe ndị mere eme n'oge ochie site n'oge ochie.
Foto Osisi nke Ala . Adreesị: пл. "Prince Alexandre I" №1. Ndị hụrụ ihe n'anya ga-enwe mmasị ileta ihe ngosi nke 50,000 eserese site n'aka ndị nna ukwu a ma ama gburugburu ụwa. N'ebe a kwa bụ ihe ngosi nke nkà nke oge a na ndị ọkachamara.
Zoo City . Adreesị: Central entrance dị na Simeonovsko Shosse boulevard. "Ọnụ ụzọ ọwụwa anyanwụ site n'okporo ámá Srebarna 1. Na mpaghara nke hectare 250 ị ga-ezute ọtụtụ osisi na ọ bụghị anụmanụ na nnụnụ.
Kathedral St. Sophia . Adreesị: Paris Street 2. Nke a bụ Katidral, nke e wuru na 6th narị afọ, nyere aha na isi obodo Bulgaria.
Ezigbo mmasị banyere Bulgaria na Bulgarians
Sofia bụ obodo kasị ochie na Europe dum;
Bulgaria bụ mba mbụ Slavic, nke na 865 nakweere Iso Ụzọ Kraịst;
Ụdị mkpụrụ okwu na Bulgaria bụ Cyrillic, nke yiri nke Russian, akwụkwọ ozi E, E na N adịghị n'ime ya, ma e nwere akwụkwọ ozi b, nke a abụghịkwa ihe siri ike;
80-85% nke mmanya nke ụwa na-ebupụ si Bulgaria;
Ndị bi n'ógbè ahụ na-akwụ ụgwọ ruo 40% dị ka ụtụ isi;
Ihe oriri na - atọ ụtọ kachasị mma - banichka ma ọ bụ banitza (mpempe akwụkwọ dị iche iche na brynza na spinach) .Nke cheese dị ka nke ahụ adịghị adị;
Kiselo mlyako - mba kefir - enweghị ihe analogues n'ụwa, ebe a na-emepụta ya na mgbakwunye nke nje bacteria pụrụ iche. Na Japan ọ dị nnukwu mkpa na a na-ewere ya dị ka "elixir nke ogologo ndụ";
Ndị Bulgarian anaghị anọkarị oge ma na-egbu oge. Na mgbakwunye, ndị a na-eji àgwà dị otú ahụ na-adịghị mma dị ka anyaụfụ. Ndị agbata obi na-enwe obi ụtọ ịkọrọ ibe ha okwu;
Bagpipe bụ ngwá ọrụ mba;
N'obodo obodo ndị a na-enwekarị nhọrọ maka ndị obodo na ndị mba ọzọ. Dị ka o kwesịrị ịdị, ihe dị iche na ahịa dị iche iche;
"Ee" nods na Russia pụtara "mba" na Bulgaria, na ntụgharị ihu. Kpachara anya!
Banyere ụlọ ahịa Bulgarian
Ọtụtụ n'ime izu ike m nọ na obere obodo a na-akpọ Bansko. Na mgbakwunye na ịdị umeala n'obi, ọ dịkwa ịrịba ama maka ọnụ ahịa ya dị oke mma, ọdịdị mara mma nakwa mgbe ọ na-adịtụghị enwe nchekasị. Ọnụ ọgụgụ nke ndị njem nleta na-emetụta ụkpụrụ egwu; a na-afụ ụda balloon ruo ogologo oge na ikuku, ọ bịakwara ọsọ ọsọ na steeti nke na-ebute mkpọtụ siri ike, nke na-ebibi ma na mberede. Ìgwè ndị njem nleta si mba dị iche iche nke Europe, tinyere àgwà ọjọọ nke ndị obodo - iji kwupụta foto nke ndị ikwu nwụrụ anwụ n'ọnụ ụzọ ụlọ ha. Otú ọ dị, ndị si Bansko nwekwara obiọma na omume enyi nke, n'ozuzu, na-ekpuchi ikuku nke photonecropolis. Tụkwasị na nke a, enwere m mmasị na otu otu nri nri obodo na nri nri obodo, mgbe m na-eri nri dị ukwuu, a kpọbatara m na akaụntụ ma tụba ya na akwa pụrụ iche nke nwere mmetụta dị egwu nke nnukwu mma. Ọ bụ ezie na ịme otu ihe ahụ ka e nyeghi ego ahụ.
Ugbu a banyere cha cha. Na Bansko, ha na-ata ahụhụ n'ezie. N'ihi na ịkwado ihe ịrịba ama na-egbukepụ egbukepụ bụ ụlọ ndị na-ere ọkụ na-ekpuchi ọkụ ọkụ. Ana m echeta ebe abụọ, otu dị na nkwari akụ Vihren, nke ọzọ na-eji obi ụtọ akpọ Blitz. Site n'ụzọ, nke ụlọ ịgba chaa chaa niile dị na Bansko ọ na-ele anya kachasị mma, site na ndị ọzọ ọ bụ ndị ọrụ mara mma na ọnụnọ nke igwe ruleti. Onye nchịkwa mpaghara ahụ nọ na Russian. O kwuru na na Bulgaria, ọ bụ naanị casino nkịtị na Sofia na Varna.
Ọfọn, m erubeghị Varna ma, ana m aga Sofia. Ná mmalite, anọ m na Plovdiv. Ihe dị mkpa, ọrụ na ọnọdụ ndị ọzọ. Ma enwere m obi ụtọ na m nwere ụbọchị n'efu. Ọ nọgidere na-ekpebi otu esi aga n'isi obodo Bulgarian. M na-aga ịṅụ ihe ọṅụṅụ, n'ihi ya, a na-ekwu na m ga-ebu ụgbọ ala mgbazinye, njem na bọs ahụ yikwara ka ọ na-atọ ụtọ. Ma nwa nwoke Ukraine nke aha ya bụ Taras bịara napụta m. O bi na Bulgaria maka afọ 10, ya mere, na-azụ ahịa ebe a. Taras mere ka m mara Volodya, onye si na Saratov na-ekpo ọkụ. N'ebe ndịda ebe a, nwata ahụ chọtara ụlọ nke abụọ. N'ozuzu ya, o kwetara ka m were ụfọdụ ego na-asọ oyi. Na ụzọ, Volodya kwetara na ọ dịtụbeghị Sofia ma ọ bụ ụlọ cha cha, ya mere njem a na-amasị m dịka m.
Anyị rutere n'isi obodo Bulgarian, obere oge, ma achọrọ m inwe oge iji mee ya. Maka ezi ihe, enwetara m ọtụtụ ebe nleta nleta ndị dị mkpa, nke m ga-agwa maka nkọwa ndị ọzọ na posts ndị ọzọ, na mgbede gara ụlọ chaa chaa. Enwere m ike ịga leta atọ: Princesses, Viva na London.
The Princess Casino dị na Rodina Hotel. Ọ bụ ezigbo ụlọ ọrụ: usoro ihe atụ nke roulette, poker na blackjack - naanị 9 tebụl. Enwere ike itinye ego na dollar, euro na obodo. A na-ekwe ka ibe gị zụta ozugbo na tebụl. Nwa-nwanyi abughi ihe ojoo, mana oge na-aga n'ihu, achoro m ihu ihe kariri.
Nke abụọ n'ime nleta nke nleta bụ Viva casino. N'ime ya, ndị ahịa niile bụ ụmụ nwanyị na-eji ejiji mara mma. Ihe kachasị mma dị iche iche dị mma bụ nke dị nro, nke, ọ bụ ezie na ntakịrị ntakịrị na-adọpụ uche na egwuregwu, ma ha na-enye obi ụtọ. N'ọkụkọ chaa chaa, ọ bụ ndị mmadụ niile, ma ndị obodo ma ndị mba ọzọ. Mụ na Volodya gbalịrị ịchọta ebe dị na tebụl blackjack dị ala - ndị ọzọ nọ n'ọrụ. N'ihi ya, m ga-egwuri egwu na stakes ụmụaka. Onye na-esote anyị nọdụrụ otu nwoke, na mbụ, akpọrọ m ya ka ọ bụrụ onye ọkụ na-agba llama. Oge niile mgbe egwuregwu ahụ nọ na-aga n'ihu, ọ na-ekwu okwu ụfọdụ n'echeghị echiche n'asụsụ ya. Enwere m isi akụkụ nke okwu ya, mgbe Volodya kọwara - ọ bụghị nwanyị ludoman, kama nna nke nwa nwanyị croupier na uwe ejiji na neckline. Ọtụtụ mgbe, ọ rịọrọ nwa ya nwanyị ka o laghachi na mahadum, ma, maka mmetụta ka ukwuu, na-akpọ ya nwanyị akwụna mgbe ụfọdụ.
Ka ọ na-erule oge aka nke elekere gafeworo n'etiti etiti abalị, mụ na Volodya na-aga n'ihu ụlọ ọrụ ọzọ. A na-akpọ ụlọ nkwari akụ London, ọ kelere anyị aka ogwe aka wee hapụ ihe ngosi kachasị mma. Na London, e nwere egwuregwu poker. A na-emegharị nlegharị anya ebe a, ha na-agbasakwa na plasma na nnukwu ọnụ ụlọ. Na mgbakwunye na mgbanaka telivishọn na-adabere n'elu mgbidi ahụ, o nwekwara tebụl 13 na abụọ ọzọ dị na mpaghara poker club. N'ebe a na-enwekwa ụlọ nzukọ VIP, ma ọ bụghị mmadụ nile nabatara ebe ahụ. Site n'ụzọ, ndị ọrụ na London dị mma, ma ọ na-akawanye mma, na-ekwu okwu n'asụsụ Russian, mana n'asụsụ Bekee ma ọ bụ asụsụ mba ọzọ. Ịmata asụsụ adịghị eme ka nghọta dị mfe, kama ọ na-eme ka ọrụ dum n'ogologo.
Na Sofia, e nwere ndị ọzọ casinos, ma ọtụtụ n'ime ha bụ ụlọ nzukọ nke oghere ndị na-eji aghụghọ na-enwu enyo. O doro anya na ịgba chaa chaa na Bulgaria abụghị nri bụ isi, ha na-eburu ibu ọrụ nke ọdịnala ndị ọzọ, ọ dịghị onye na-abata ebe a kpọmkwem n'ihi ọnụ ụlọ casinos, ọ bụghị Vegas maka gị. Ma enwere ụkọ na ụlọ ọrụ ahụ, n'ezie, ma mmetụta m niile dị mma. Tụkwasị na nke a, akwụsịrị m njem ahụ gaa atọ casinos na pluses, ọ bụ ezie na ọ bụghị nnukwu, ma akwụ ụgwọ nke ụzọ na ntụrụndụ kpamkpam. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọta onwe gị na Bulgaria ma ịchọrọ igwu egwu - ị ga-aga n'ọdụ ụgbọ ala na-aga n'enweghị nsogbu ọ bụla, naanị ịhụghị akara ndị na-acha ọbara ọbara.
0.1 Ịgba chaa chaa na Bulgaria
0.2 Ịgba chaa chaa n'Ịntanet na Bulgaria
0.3 Ndepụta nke Top 10 Bulgarian Online Casino Sites
3 Ịgba chaa chaa na Bulgaria
3.0.1 Iwu nke Bulgaria na ịgba chaa chaa - amaokwu ihe mere eme
3.0.3 Ala "offline" casinos na Bulgaria
3.1 Ịgba chaa chaa n'Ịntanet na Bulgaria - Olee otú ị ga-esi amalite igwu egwu n'Ịntanet?
3.1.1 Ọnọdụ nke Bulgaria na akụkọ nchịkọta akụkọ dị mkpirikpi
3.1.2 Bulgaria na map nke Europe
3.1.3 Anya nke Sofia
3.1.4 Ezigbo mmasị banyere Bulgaria na Bulgarians
3.2 Banyere ụlọ ahịa Bulgarian